AMISOM oo qabatay sarkaal ka tirsan AlShabaab oo qaraxyo siday
Taliska ayaa shaaciyey in dagaalamahaan ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliska ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa shaaciyey in Arbacadii shalay ay gobolka Shabeellaha Hoose ku qabteen xubin sare ka tirsan Al-Shabaab kaasi oo watay walxo loo adeegsado qaraxyada.
Howlgalka AMISOM ma uusan soo bandhigin magaca dagaalamahaan qaybta ka ah kooxda gacan-saarka la leh Al-Qaacida oo laga soo qabtay tuulada Baladul-Amiin oo ku dhaw Afgooye, oo sidoo kalena Koonfur Galbeed ka xigta Muqdisho.
War-saxaafadeed kasoo baxay taliska ayaa lagu xusay in ninkaan uu doonayay in walxaha qarxa uu ku beegsado gaadiidka ciidamada shisheeye si gaar ah kuwa sahayda isugu kala gudbiya gobolka.
"Dambiilaha oo aan su'aallo waydiinay waxaa lagu wareejiyey ciidamadda Soomaaliya," ayaa lagu yiri qoraalka oo lasoo dhigay barta gaarka ah ee howlgalka AMISOM ee Twitter-ka.
Ninkan ayaa lagu qabtey isagoo wata lix Remote-contro, oo ah Aalado lagu qarixiyo miinooyinka, sida AMISOM laga soo xigtay.
Illaa iyo haatan ma jirto wax jawaab ah oo ay Al-Shabaab kasoo saartay sheegashada ku saabsan ruuxaan ay gacanta ku dhigeen ciidanka AMISOM, kaasi oo aanan lasoo bandhigin muuqaalkiisa.
Balse, taliska ayaa saxaafadda u soo bandhigay sawirka walxaha qarxa oo ay sheegeen in uu watay shaqsigaasi.
Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay Al-Shabaab ku xoogan tahay ayaa waxaa inta badan qaraxyo iyo weerar jidgal ah oo khasaaro geysta lagu beegsadaa ciidanka ajnabiga ah iyo kuwa xooga dalka.
AMISOM oo kun askari laga dhimayo xili ay bateen weerarada Al-Shabaab
Soomaliya 01.06.2019. 09:27
Kaliya bishii Maaj, 28 weerar oo qaraxyo loo adeegsaday ayay kooxdu ka fulisay caasimadda.
Madaxii Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan oo howlgal lagu dilay
Soomaliya 01.11.2018. 11:19